Midabka jirka ee luulka Akoya ee Shiinaha ayaa u badan cadaan. Kuusha wareega dhabta ah ee midabka casaanka ahi yihiin kuwa ugu qiimaha badan. Maaddaama qolofka hooyada luul Akoya ay yar yihiin cabbirka, luulka la beerayo sidoo kale waa yar yahay, luul ka weyn 9 mm waa dhif iyo naadir. Midabada guud waa cadaan, kareem, dahab khafiifa, iyo buluug qalin ah. Midabka aasaasiga ah wuxuu muujinayaa midab ubax u gaar ah, kaas oo ka dhigaya inuu ku iftiimiyo haweeney kasta. Waa jilicsan, xarrago, riyo, iyo qaali. Midabka casaanka u gaarka ah ee casaanku wuxuu sameeyaa dhadhan badan oo muuqda oo leh jilicsanaan.
Hadiyadaha Gabdhaha Freshwater Pearl, White Gray Freshwater Pearl, Hilqado Pearl Pear, Aaa Biyo Macaan, Hilqado Aroos, Dhalasho Dhab Ah Dhaqan Biyo Macaan,